Iindawo ezigqibeleleyo ukuya kwi-Bike yeentaba e-United States
Midlalo Eyona ndlela ibheyisekile
Iindawo eziTlanu eziphezulu kwiBhayisikili yeentaba
by EBet Puliti
Unxweme ukuya kwiNxweme ye-Bike iMeccas
Masijongane nayo: Sonke sifuna ukuchitha iintsuku ekugqibeleni ukuhlola yonke indawo yokugqibela ye-sweetletrack eli lizwe elifunekayo. Kodwa asikwazi. (Ndiyazi, inyaniso iyabuhlungu.) Ngoko, emva kokukhwela kunye nokuphanda ezinye zeendawo ezihamba phambili zokuhamba ngebhayisikili e-US, ndincincile ukuya ezintlanu kufuneka zibone iindawo. Qala ngeloluhlu ngexesha elilandelayo xa ufuna uphambili kwindawo yokuhamba.
Kukho isizathu sokuba wonke umntu athethe ngoMowabhi. Ukujongwa njengokuba " intaba enkulu yeebhayisikili ehlabathini," iindlela ezahlukeneyo zeMowabhi kunye nomhlaba uthetha i- mountain bikers kuzo zonke iinqanaba ziya kuba nexesha elimnandi.
Mhlawumbi intaba yebhayisikili eyaziwayo kakhulu ehlabathini, umzila weMohabrock weSlickrock ufumana abantu abangaphezu kwe-100 000 abatye ngonyaka. Kodwa akuyena umzila kuphela edolophini. Uninzi olungakumbi, kuquka uMongameli kunye no-Amasa Back, unikezela ngeendlela zokhetho zobugcisa. I-Klondike Bluffs kunye neNkqubo yokuThuthukiswa kweThutho phakathi kwabanye inikezela ngokuhamba ngokulula.
Kungakhathaliseki ukuba yeyiphi indlela oyikhethayo, uya kukhwela entlango. Ngoko, cwangcisa ngokufanelekileyo. Kaninzi "
Efumaneka entshonalanga yeColorado enqabileyo, iFruita inikezela ngamakhulu eekhilomitha eziya kukukholisa malunga nabani na abafuna umdla.
Ukuhamba kwendawo ye-Cliffs endaweni yokubukela ngokubanzi kwi-Grand Valley. Unomonde? I-Chutes kunye ne-Ladders, ukuqhutyelwa kweklasi, inikeza ukunyuka okuphezulu kunye neentsika ezingezizo ezibuthathaka. Kwii-2,000 ezinyaweni ezingaphezulu kweso sitya, i-Edge Loop-i-International Mountain Bicycle Association Epic trail-inikeza i-singletrack eqinile.
I-Rockier kunye nezobuchwephesha obuninzi kuneendlela ezihamba kwiiNcwadi zeeNkcazo, iiNdlela zeKokopelli zijoliswe kwi-intermediate to expert experts. Abo bafuna ukukhwela kwinqanaba elincinci bangaphinda bahlolisise ubuhle bemvelo beFruita xa behamba ngeendlela ezili-18 zendlela.
I-Nestled phakathi kwe-Blue Ridge kunye neentaba zaseAppalachian, idolophu enamandla yase-Asheville inika into enomdla njengendawo engqongileyo. Kodwa musa ukwenza iphutha, iindawo ezikhangayo zihlala ngaphandle kwedolophu, kwiintshona zeNorth Carolina ezintabeni.
Khangela akukho ngaphezu kweentaba zePisgah zeebhayisikili eziphakamileyo. Apha, i-singletrack igxotha iifomfolo ezidlulileyo kwaye ivule kwiindawo zokutya.
Umgama omncinci osempuma-mpuma, iindlela ezininzi-iikhilomitha ezilikhulu, zikhona kwihlathi laseDuPont. Ngokungafani nodongwe olubomvu lwe-Pisgah, iindlela zeDuPont zixutyana ne-granite kunye nomhlaba onesihlabathi. Thatha uhambo ukuze uzibonele ukuba kutheni u-Asheville ubizwa ngokuba nguMowabhi waseMzantsi! Kaninzi "
I-East Burke ibonakala ngathi iphakathi nendawo, kodwa iVermont yase-Northeast Kingdom iphela iiyure ezimbalwa ukusuka eBurlington naseMontreal-kwaye bhetele ukholelwa ukuba ixabiso le drive. Idolophu encinane ibekwa kwimephu inxalenye yeeNdlela zoBukumkani, i- mecca ye- bicycle ephakamileyo enika ngaphezu kweekhilomitha ezingama-100 zeendlela ezingekho ngeenjini.
Akunzima ukubona ukuba kutheni uMbutho weeNkqantosi zeeNtshonalanga zeZizwe ezikhethiweyo zendlela zoBukumkani zibeka indawo ye "Epic" ukukhwela. Le ndawo inemimandla ejikelezayo ye-singletrack, indawo enokukhatyathwa kakuhle kunye nomhlaba omhle. Iindlela ezibonakalayo zilula ngokuqala, eziphakathi kunye neziphambili. Izinkomo eziboyiweyo, i-maple isiraphu kunye ne-sugar shacks zinika indawo yokufumana amava okwenene eNew England.
Kutholakala kummandla weNtshona weeNtaba zeRoyy, iPark City inikeza ezinye zezinto ezivelele kakhulu-ngokuzenzekelayo. Kwii-8,000 iinyawo ngaphezulu kwinqanaba lolwandle, i-Mid Mountain Trail ye-20 okanye ye-mile inama-3 000 amanyathelo okuguqulwa kwe-up-and-down. Zinike ixesha elaneleyo lokunyanisekisa.
Indlela ephakanyisiweyo yaseMid Mountain iqala kwiSiliva yaseDeer Valley Resort, kodwa unokwenza uhambo lwakho ngokuthatha iProeney North, i-Sweeney South, iDaly Canyon okanye iDeder Valley ukuya eMid Mountain. Kungakhathaliseki ukuba yeyiphi indlela oyenzayo, lungela ukunyuka!
Ngokuqinisekileyo, ezinye iindlela zilamatye ezinamandla kwaye, ewe, zikhona ezimbalwa ezikhuphukeyo, kodwa iPark City inikeza iindlela ezahlukeneyo, zilungele ukuqala kokuhamba ngeentaba. Imephu yakho indlela ngokufanelekileyo.
Amahlaya amaBhetele aphezulu aMaxesha onke
Ukuzimela kweNyakatho Afrika
Ukuchaza iMinyaka Ephakathi
Saturn kwi Scorpio